गोरखा साम्राज्यसम्बन्धी प्रथम-राष्ट्रका दृष्टिकोणबारे बहस हुने | SaraKhabar.com
गोरखा साम्राज्यसम्बन्धी प्रथम-राष्ट्रका दृष्टिकोणबारे बहस हुने
काठमाडौं । गोरखा साम्राज्यलाई नेपालका प्रथम-राष्ट्रहरूले कसरी बुझ्दै आएका छन् भन्ने सम्बन्धमा बहस हुने भएको छ । उक्त कार्यक्रमको आयोजकमा ताम्सालिङ नागरिक समाज साथै संयोजकमा एस.सि.आर.सि. रहेको छ । कार्यक्रम यही पुस २६ गते नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घीय कार्यालय चुच्चेपाटी (हायत्गेटअगाडि)को सभाहलमा हुनेछ । कार्यक्रको चोहो (अध्यक्ष) डा. मुक्तसिंह तामाङ (मानवशास्त्री) तथा गन्बामा डा. गणेश योञ्जन (जापानका लागि नेपाली पूर्वराजदूत) रहनुहुनेछ । वक्ताहरूमा बुद्धछिरिङ मोक्तान (राजनैतिक विश्लेषक), विश्वभक्त दुलाल 'आहुति' (मार्क्सवादी चिन्तक/विश्लेषक) साथै मोहन गोले (अध्यक्ष- नेपाल तामाङ घेदुङ) रहनुहुने जनाएको छ ।
अहिलेको विश्वजगत्लाई हेर्ने हो भने प्रथम-राष्ट्रहरू पहिचानको मुद्दामा लामबद्ध हुँदैछन् । यस्तो परिवेशबीच कथित एकता दिवसमाथि यहाँका प्रथम राष्ट्रहरूले आफ्नो अभिमत राख्न पाउने भएका छन् । यसकालागि ताम्सालिङ नागरिक समाजले ''गोरखा साम्राज्य : नेपालका प्रथम-राष्ट्रहरूको दृष्टि'' शीर्षक जुराएको छ । यसक्रममा गोरखा साम्राज्यप्रति प्रथम-राष्ट्रका बुझाई, इतिहास लेखनमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै कसरी आपसी सद्भावना स्थापना गर्न सकिएला ? यहाँ बहुल राष्ट्रिय एकता कसरी निर्माण गर्न सकिएला भन्ने सम्बन्धमा सेमिनार शैलीको बहस गर्ने भएको छ । यसप्रकार ऐतिहासिक कार्यक्रम हुने भएकोले सहभागिताकालागि आयोजक ताम्सालिङ नागरिक समाजले आह्वान गरेको छ । कार्यक्रमलाई वार्षिक रूपमा निरन्तरता दिँदै जाने संयोजक संस्था एस.सि.आर.सि.ले जनाएको छ ।